ကျွန်တော်ဟာ သိပံ္ပနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မြောက်များစွာသော နည်းပညာတက္ကသိုလ်များထဲက တစ်ခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လက်ထောက်ထိက တစ်ဦးပါ။ ဆန်တစ်ပြည် ၁၂၀၀၊ ဆီတစ်ပိသာ
How Windows Vista will change the PC market – for the better
How Windows Vista will change the PC market – for the
Congrats! to Myanmar Women soccer Team
သြစတေးလျ အသင်း ကို semi-final မှာ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်လုပွဲ သို့ တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး
Moe Yu San – Face of Myanmar Commercials
Just like Htet Htet Moe Oo in the past, and Eaindra Kyaw
Funny things about Our Myanmar Actresses!
ယောက်ျား လုပ်သမျှ ပြုံးပြံးကြီးကြည့်ပြီး အမြဲကျေနပ်နေသူ (အိန္ဒြာကျော်ဇင်) 😂 ၁၀ တန်း အောင်ဖို့ မလိုဘူး ဘစ်ကနီ အကောင်းစားတွေ ဝတ်ပြီး ရေထဲမှာ ပေါက်စီပွလာတဲ့အထိ ဓါတ်ပုံရိုက်တတ်ဖို့ပဲ လိုတယ် (ရွှေမှုံရတီ) 😂 ဘုရားတရားတွေ အရမ်းလုပ်တယ် ဒါမယ့် ငါးပါးသီလခံရင် ၃ကြောင်းမြောက်ကို ဘယ်တော့မှ လိုက်မဆိုတာ (စိုးမြတ်နန္ဒာ) 😂 ကိုယ့်ကို ဝုန်းလွန်းအားကြီးလို့ နောက်မဝုန်းရဲအောင် ဆိုပြီး ကိုယ့်စိတ်ထဲ ထင်နေတဲ့တွေ့ရာလူကို လေဆိပ်ထိ သွားဖမ်းခိုင်း ပါဝါရိမ်းဂျားတွေ ဆန်ပြီး ရှေ့နေ၁၂ ယောက်နဲ့ ပါဝါတွေ ပြလိုက်တယ် ဒါမယ့် ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် ဖြစ်သွားတယ် (ဝတ်မှုံရွှေရည်) 😂 ဖွံ့ဖွံ့ ထွားထွားမဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ အမြဲတမ်း စားသောက်နေတာ (ဖွေးဖွေး) 😂 […]
Eain Chit’d Donation
အနုပညာကြေးတွေစုပြီး လှုတဲ့ အိမ့်ချစ် ရဲ့ ၁၈ ကြိမ်မြောက်အလှု အဆိုတော်အိမ့်ချစ်က သူမရဲ့တစ်နှစ်တာ အနုပညာကြေးများထဲမှ ဆယ်ပုံတစ်ပုံကိုအမြဲဖယ်၍စုထားသောအနုပညာကြေးများဖြင့် နှစ်စဉ်အလှု လုပ်ခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်နှင့်ဆို ၁၈ ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်အတွက် ဆုတောင်းပြည့်အေးချမ်းအောင်မြင်အုတ်ခွက်ဘုရားပင်ဆောင်ပူဇော်ခြင်းနှင့်စတုဒီသာကျွေးမွေးလှုဒါန်းခြင်းကို ယနေ့ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းက သူမ၏နေအိမ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။့ Credit to ရဲရဲ/Photo Aung Zaw Min Popular
Myo Ko Ko San is free!
ညီမပြန်ထွက် လာပါပြီ CID က ညီမဖုန်းကိုစစ်ဆေးတာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကင်းရှင်းကြောင်း အတည်ပြုစစ်ဆေးချက်ရလို့ ပြန်ထွက်လာပါပြီ စိတ်ပူနေကြတဲ့သူတွေ စိတ်မပူအောင်လို့ အကြောင်းကြားတာပါ အားလုံးကို ကျေးးဇူးတင်ပါတယ် ဖုန်းကတော့ လက်ရှိ သိမ်းထားဆဲဖြစ်လို့ fb အချိန်ပြည့်တော့ရှိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး အားလုံးဝမ်းသာအောင်လို့ပြောပြတာပါ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ မပုတ်ခတ်ကြပါနဲ့ ညီမ မကြာခင် ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲ ပြန်လာပါ့မယ် အားလုံးပျော်အောင် အမဖုန်းယူသုံးရတယ် :* :* :*